Jikwaa oru gị nke ọma na Redbooth | Esi m mac
Jikwaa oru gị nke ọma na Redbooth
Mee nwa ọhụrụ bụ nkwukọrịta n'ịntanetị na mmekorita mmezi maka ijikwa ọrụ na ọrụ maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ ọ bụla, nke ị nwere ike nweta ihe ruru pacenti iri ise ọzọ. Mmasị ziri ezi? Nọgide na-agụ ma ị ga - achọpụta igodo nke sọftụwia gara nke ọma.
Redbooth, nhazi oru ngo sara mbara n'otu ebe
Mgbe ị gafere ọtụtụ mmelite n'ihi mgbalị a na-eme mgbe niile iji melite, Mee nwa ọhụrụ egosila na ọmarịcha arụmọrụ dịka sọftụwia njikwa njikwa kachasị elu. Ezi ihe akaebe nke a bụ ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-eji ngwa a ugbu a, na ndị aha ha dị ka Cisco, BBC, Airbn, AT&T, Mahadum Harvard, Novartis, Audi, Avis, Deutsche Telecom, DHL, eBay, Spotify, Warner Bross, Mahadum Duke na ihe ndị ọzọ, ruo ihe karịrị nzukọ 400.000 gburugburu ụwa.
Rachel Valosik nke Griffin Technology kwuru na "Mee nwa ọhụrụ ọ na-enye usoro sara mbara nke ịme ngwa maka mmekorita, mmekorita, njikwa faịlụ na mkparịta ụka, dị mfe maka otu ụlọ ọrụ anyị.
Kedu ihe kpatara ya Mee nwa ọhụrụ n'etiti asọmpi ahụ? Gini mere ihe oru ngo a ji achikota otutu echiche di nma? Achọpụtara azịza ya n'ọtụtụ njirimara ya dị ka:
Ọdịmma dị mma, nke na-enweghị nghọta na nke dị mfe iji rụọ ọrụ nke na-eme ka o kwe omume itinye uche na ọrụ na enweghị nhịahụ.
Ọrụ etiti: site n'otu ebe ị nwere ike ịme ihe niile (tụlee echiche, mee mkpebi, nweta faịlụ na akwụkwọ, mepụta ma nye ọrụ, wdg)
Ebe ndabara iji malite ịrụ ọrụ ozugbo.
Na-enweghị oke, mgbe ahụ Mee nwa ọhụrụ awade na-akparaghị ókè wọkspeesi.
Mgbanwe, n'ihi na agbanyeghị na emepụtara ya nke ọma maka nnukwu otu ma ọ bụ otu, ọ bara uru maka ndị otu mebere mmadụ ole na ole.
Ọ nwere ngwa maka iPhone, iPad na gam akporo nke na - ejikọ gị mgbe niile. Enwere ngwa etinyere maka Apple Watch.
Ọ na-enye gị ohere ịme ogbako vidiyo na HD na-ahapụghị ngwa ahụ, kesaa ihuenyo, dozie oku ma ọ bụ dekọọ nzukọ.
Ngwa ngwa, dị mfe na, karịa ihe niile, nkwukọrịta mmiri dị n'etiti ndị otu ọrụ dị iche iche na-ekele otu nkata otu akpakọrọ n'ime ebe ọrụ.
Ihe okike di mfe nke akuko di elu nke g’eme ka inyocha oru nke oru ma obu choputa mkpa na / ma obu ihe ndiiche n’iru.
Nchikota zuru oke nke Mee nwa ọhụrụ ya na ngwa na oru gi kachasi nma: Evernote, Igbe, Google Drive, Dropbox, Outlook, Zendesk na otutu ndi ozo.
Nche, n'ihi na ozi na data gị niile nọ n'okpuru 256-bit encryption na akwụkwọ SSL (dị ka a ga - asị na ọ bụ ụlọ akụ), yana ebe data na - akwado ozi ahụ nwere PLC-, ISO- na SAS70 asambodo nchekwa.
Nwere ike ịhọrọ ịrụ ọrụ na igwe ojii ma ọ bụ wụnye ya na sava ụlọ ọrụ gị n'azụ firewall.
Nhazi onwe na n'efu maka ndi otu gi.
En Mee nwa ọhụrụ Ha kwenyesiri ike na uru nke ngwanrọ ha na-enye gị ụbọchị ikpe n'efu n'efu 30. Ma ị bụ SME ma ọ bụ nnukwu nzukọ, oge eruola nwalee Redbooth iji jikwaa ọrụ na ọrụ gị, wee malite ịbawanye arụmọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Jikwaa oru gị nke ọma na Redbooth
Apple na-akwalite onwe ya na Super Bowl na mgbasa ozi ndị ọzọ
Apple na-enye gị ihe nchebe ihuenyo